कारोबारको अन्तिम दिन यि कम्पनीहरुको शेयरमुल्यमा उच्च वृद्धि, कुनको कति प्रतिशतले बढ्यो ? – OnlinePahar
कारोबारको अन्तिम दिन यि कम्पनीहरुको शेयरमुल्यमा उच्च वृद्धि, कुनको कति प्रतिशतले बढ्यो ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १४:३० Basanta Khanal	0 Comments	share market
कारोबारको अन्तिम दिन (बिहीबार) कारोबार सुरु भएको दुई घण्टामा ६ कम्पनीको शेयरमुल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । आज महालक्ष्मी विकास बैंक,कामना सेवा विकास बैंक, रुरु जलविद्युत र जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमुल्यमा सकरात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तै, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र साइन रेसुङगा्को शेयरमुल्य ९ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
← शनिवार नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा यि बिभिन्न रोगहरुको निःशुल्क ओपीडी हुने
माग्नेले काखमा लिएको बच्चा किन सधैं निदाइरहेको हुन्छ? (यसका पछाडि लुकेको भयानक रहस्य) →
शेयरबजारमा १४९ कम्पनीको शेयरमुल्यमा गिरावट, कारोबार रकम कति ?
आज पनि २३.१९ अंकले घट्याे सेयर बजार, २ वटा उपसमूह हरियाे